ရှင်စော (ပုဂံ) - ဝီကီပီးဒီးယား
၁၂၃၁? – ၁၂၃၅
၂၄ ဧပြီ ၁၂၄၁ နောက်ပိုင်း
ရှင်စော (အစော ဟုလည်း သိကြ) သည် ပုဂံခေတ် နရသိင်္ဃ ဥဇနာမင်းသား၏ ဇနီးဖြစ်သည်။ ဂျီအိပ်လုစ် နှင့် ဒေါက်တာသန်းထွန်း ကဲ့သို့သော သမိုင်းပညာရှင်များကနရသိင်္ဃ ကို ပုဂံမင်းဆက်မှ မင်းတစ်ပါး အဖြစ် သတ်မှတ်ကြသော်လည်း မည်သည့် မြန်မာရာဇဝင်ကျမ်းကမှ မင်းအဖြစ် ဖော်ပြထားခြင်း မရှိပေ။ ဒေါက်တာထင်အောင်နှင့် မိုက်ကယ်အောင်သွင် အစရှိသော သမိုင်းပညာရှင်တို့က နရသိင်္ဃကို မင်းတစ်ပါးအဖြစ် အသိအမှတ်မပြုကြပေ။
အေဒီ ၁၂၃၅ ဇူလိုင် ၁၉ တွင် ရှင်စော၏ မတ်တော်စပ်သူ ကျစွာမင်း နန်းတက်ချိန်တွင် ရှင်စော၏ ခင်ပွန်း ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ ရှင်စော လှူဒါန်းခဲ့သော စေတီမှ တွေ့ရှိရသော ကျောက်စာအရ သူမသည် အေဒီ ၁၂၄၁ ဧပြီ ၂၄ အထိ သက်ရှိထင်ရှားရှိနေခဲ့သည်။[note ၁]
↑ See the inscription at (Taw, Forchhammer 1899: 71). Taw နှင့် Forchhammer တို့က ရှင်စောအား ဥဇနာနှင့် နရသီဟပတေ့တို့၏ မိဖုရားဖွားစောဟု မှားယွင်းစွာ သတ်မှတ်ခဲ့သည်။ (၁) ကျောက်စာတွင် ရှင်စောအား သိင်္ခပတေ့နှင့် တရဖျား (တာမွန်) တို့၏ မိခင်အဖြစ် အတိအလင်း ဖော်ပြထားသည်။ (၂) (မဟာရာဇဝင်ကြီး အတွဲ ၁၊ ၂၀၀၆၊ စာ ၂၃၄၊ အောက်ခြေမှတ်စု #၁) အရ ဖွားစောကို ခန့်မှန်း အေဒီ ၁၂၄၀ တွင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး နရသိင်္ခဥဇနာတွင် ဖွားစောအမည်ရှိ အခြားမိဖုရားတစ်ပါးရှိခဲ့ပြီး သူမမှာ ဒုတိယဇနီး စောမင်းဝိုင်း ဖြစ်သဖြင့် Taw နှင့် Forchhammer တို့၏ ကောက်ချက် မှားယွင်းသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
↑ သန်းထွန်း ၁၉၆၄၊ စာ ၁၃၂
↑ အောင်သွင် နှင့် အောင်သွင် ၂၀၁၂၊ စာ ၉၉
အောင်-သွင်၊ မိုက်ကယ် အေ; Maitrii Aung-Thwin (2012)။ A History of Myanmar Since Ancient Times (illustrated ed.)။ Honolulu: University of Hawai'i Press။ ISBN 978-1-86189-901-9။
မွေးဖွား ၁၁၉၀ ဆယ်စုနှစ် ကွယ်လွန် ၂၄ ဧပြီ ၁၂၄၁ နောက်ပိုင်း
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရှင်စော_(ပုဂံ)&oldid=685811" မှ ရယူရန်
၁၂ ရာစု မြန်မာ အမျိုးသမီးများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၀ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၇:၁၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။